Sirdoonka Atoobiya oo Been Dhoob-Dhooba Dhigay Warbaahintooda – Rasaasa News
Jijiga, Oct 31, 2014 – Qoramadan waxaan u soo qaatay kolkii aan arkay in dad badan ay shakigalisay wabixin uu qoray sirdoonka Atoobiya oo ku maxaabsaday qoraal ay qortay kooxda la socodka xakamaynta hubka ee Somaliya iyo Eritrea.
Xukuumada haatan ka arimisa Atoobiya ayaa muddo 24 sano ah qori caaradi ku haysata talada dalka, taas oo dunida tusta dastuur qurux badan oo ku kooban buugta, waxayna sheegtaa in ay tahay xukuumad talada dadwaynuhu leeyahay [dimocracy]. Arimahaas oo ayna waxba ka jirin.
Dunida oo maanta ayna waxba ka qarsoonayn, ayaa sanad walba Atoobiya galisa safka hore ee dalalka uu tacadiga ugu badan ka dhaco. Waxbana kama qabato eedaha loo jeediyo, wayba uga dartaa shacabka.
Warbixintii ugu dambaysay ee Golaha Amaanku soo saaray October 22, 2014 ayaa lagu eedeeyey Atoobiya in ay gaysato dambiyo ka dhan ah dadka. Warbixintu meelaha ugu daran waxay ku sheegtay Qoomiyada Oromada iyo Somali-Ogaden. Warbixintu waxay sheegtay in boqolaal ruux oo shacab ah ay xukun la,aan xabsi ku jiraan, lama oga bay tidhi warbixintu xaalada ay ku sugan yihiin maxaabiistu.
Dhawr goor oo hore waxay Hayyada xuquuqda aduunku wax ka qortay in maleeshiyada Liyuu Boolisku ay dhibaatooyin xun ku hayaan shacabka Somalida-Ogadeeniya; kuwaas oo isugu jira kufsi, dhac, xadhig iyo dil.
Dawlada Atoobiya waxay caado ka dhigtay in warbixin kasta oo Hayyadaha caalamku ku eedeeyaan intii ay wax ka qaban lahayd eedaha, waxay saartaa gudi diyaariya qoraal been abuur ah oo ay ku sheegto in ay soo saartay isla hayyadahaasi. Qoraaladaas oo ay ugu talo gasho in ay ku habaabiso dadka aan dhabta la socon iyo dadkeeda oo ay ka xidhay ilaha wararka aduubka.
Dhawaan waxay ku qortay bogeeda internetka ee la yidhaahdo hornaffair warbin dheer oo ay ku sheegtay in Golaha Amaanka UN-tu ka soo saaray wabixin jabhada ONLF kuna sheegay in ay tahay Jabhadu argagixiso. Warbixintaa waxaa qoray sirdoonkeeda, wayaabo badan oo ku jira ayaa hore loogu qoray bogageeda internetka. Waxaa kale oo warbixinta ku jira waraysiyo ay ka qaadeen sirdoonka Atoobiya dad maxaabiis ah oo ay bilowgii sanadkan ka soo afduubtay dalka Kenya.
Wabixinta dhabta ah ee Golaha Amaanku kooxda la socodka ilaalinta hubka Soomaaliya iyo Eritearia ka qortay waxaa la soo saaray October 15, 2014. Wabixintaas waxaa ku jira hal jumlad oo ah in Eritrea ay hub siiso Ogaden National Liberation Front [ONLF] iyo Tigray People Dimocratic Movement [TPDM].
Horay Atoobiya waxay u badashay warbixin ay hayyada Xuquuqda dadku ka diyaarisay Satellite-ka kaas oo ay ciidamada Atoobiya ku gubeen tuulooyin badan iyo wadar dil dad shacabka sanakii 2008.
Warbixinada been abuurka ah ee ay diyaariyaan sirdoonka Atoobiya kolka ay ka gadmi waayaan aduunka, waxaa dib loogu ciqaaba madaxda sirdoonka sida Welde Mariam oo hore u ahaan jiray taliye sare oo ahaa sirdoonka Atoobiya oo qoray book uu ugu magac daray Argagixisada Geeska Afrika.
ONLF waa gobonimodoon dagaal kula jira gumaysiga Atoobiya in ka badan qarni. ONLF- Xubnaheeda iyo taageerayaasheedu waxay ka hawlgalaan America, Yurub, Australia iyo Afrika. Waxayna kuwa badan oo ka mid ah haystaan dhalashooyin reer galbeed ah, kuwaas oo kula doodi kara Atoobiya golayaasha caalamka.
Doorasha Madaxtinimada Dalka Itoobiya oo Lashaaciyay Xiliga la qaban doono!